वेबको लागि तपाईंको फोटो प्रिपिpping गर्दै: सुझावहरू र प्रविधिहरू Martech Zone
यदि तपाईं ब्लगको लागि लेख्नुहुन्छ भने, एक वेबसाइट प्रबन्ध गर्नुहोस्, वा फेसबुक वा ट्विटर जस्ता सोशल नेटवर्किंग अनुप्रयोगहरूमा पोष्ट गर्नुहोस् भने, फोटोग्राफीले तपाईंको सामग्री स्ट्रिमको अभिन्न अंग खेल्दछ। के तपाईंलाई थाहा नहुन सक्छ कि तारकीय टायपोग्राफी वा भिजुअल डिजाइनको कुनै रकम गुनगुनाउने फोटोग्राफीको लागि बनाउन सक्दैन। अर्कोतर्फ, धारिलो र ज्वलन्त फोटोग्राफीले प्रयोगकर्ताहरूलाई सुधार गर्दछ? तपाईंको सामग्रीको बोध र तपाईंको साइट वा ब्लगको समग्र रूप र अनुभव सुधार गर्न।
At ट्यूटिभ हामी वेबको लागि अन्य व्यक्तिको फोटोग्राफी तयार गर्न धेरै समय खर्च गर्छौं, त्यसैले यहाँ केहि द्रुत सूचकहरू छन् जुन हामीले बाटोमा उठाएका छौं।
कृपया नोट गर्नुहोस्: तल टेक्निकल निर्देशनहरू Adobe Photoshop CS4 मा सन्दर्भ गर्नुहोस्। त्यहाँ अन्य प्रोग्रामहरू छन् जुन समान कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्न सक्दछ, त्यसैले यदि तपाईंसँग फोटोशपमा पहुँच छैन भने कृपया तपाईंको छवि सम्पादन कार्यक्रमको लागि मद्दत कागजात जाँच गर्नुहोस् यदि तपाईंले यी प्रविधिहरू प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ भने।
रिसाइज र शार्पेनिंग
प्राय: तपाईको वेबसाइट वा ब्लगको लागि फोटो तयार गर्न तपाईले यसलाई सानो बनाउनु पर्छ, खास गरी यदि यो बहु-मेगापिक्सलको डिजिटल क्यामेराबाट आएको हो। यो जान्नु महत्त्वपूर्ण छ कि आकार घटाउँदा विस्तारमा भएको कटौतीलाई सlies्केत गर्दछ, किनकि फोटोशप मशिंग गर्दैछ? सँगैको पिक्सेल सँगैको नयाँ आयाममा छवि फिट गर्न; यसले फोटोलाई धमिलो हेराई दिन्छ।
क्रममा? नक्कली? तपाईंले हराउनु भएको विवरण तपाईंले अनशार्प मास्क फिल्टर लागू गर्नुहोस् (फिल्टर> अनशार्प मास्क)। काउन्टर-सहज ज्ञान युक्त नाम लाई पछ्याउँनुहोस् - अनशार्प मास्क वास्तवमा तीक्ष्ण हुन्छ!
तपाईं विवरणहरू कति स्पष्ट र स्पष्ट उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ चित्रा2तल।
अनशार्प मास्क डायलग बक्समा नियन्त्रणहरू डरलाग्दो लाग्न सक्छ, तर वेबको लागि फोटोहरू तयारी गर्ने शुभ समाचार भनेको तपाईंले उनीहरूसँग धेरै गडबड गर्नुपर्दैन। म 50०% को रकम,।। को एक त्रिज्या र5को थ्रेसोल्ड लगभग सबै समयमा काम गर्दछ।
छविहरू क्रप्टेली क्रप गर्नुहोस्
केहि परिदृश्यहरूमा, तपाइँ थम्बनेलको श्रृंखला सिर्जना गर्न चाहानुहुन्छ जुन छविको ठूलो संस्करणमा लि link्क हुन्छ। यसका लागि सामान्य परिदृश्यहरू फोटो ग्यालरी वा समाचार हेडलाइटहरू हुन् जुनसँग ठूलो फोटोको थम्बनेल संस्करण हुन्छ।
छविलाई थम्बनेल आकारमा कम गर्दा, आकार परिवर्तन गर्नु अघि छविलाई यसको आवश्यक तत्त्वहरूमा क्रप गर्न प्रयास गर्नुहोस्। यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई सामग्रीको आकार र साना आकारहरूमा पनि अर्थ बुझ्न अनुमति दिन्छ।
चित्रा 1 एउटा छवि हो जुन सिधा यसको थम्बनेल आयाममा मापन गरिएको छ, तर चित्रा2फोटो को सबै भन्दा महत्वपूर्ण तत्वहरु क्रप गरिएको छ। यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई छिटो बुझ्नको लागि छविले के कुराकानी गर्न कोशिस गरिरहेको छ र अधिक जानकारीको लागि क्लिक गर्न प्रोत्साहन दिन्छ।
कम्पन र संतृप्ति
छविको संतृप्ति यसको रंगको तीव्रता हो। कम सन्तृप्त छविहरूमा, छालाको टाउको बिरामी पर्दछन् र आकाशहरू खरानी र सुस्त देखिन्छन्। तपाईंको छविहरूमा केही जीवन थप्नको लागि, फोटोशप सीएस4सँग फिल्टर छ जुन मैले भाइब्रेन भनिन्छ।
यदि तपाईं आफ्नो सुस्त फोटोग्राफीमा छिटो जीवन ल्याउन चाहानुहुन्छ भने निम्न प्रयास गर्नुहोस्:
नयाँ समायोजन तह थप्नुहोस् (तह> नयाँ समायोजन तह> कम्पन)
कम्पन स्लाइडर बढाउँदै (चित्रा 2) समायोजन प्यानल भित्र छाला टोनको रक्षा गर्दा र color्गीन तीव्र हुनेछ (उनीहरूलाई धेरै सुन्तलाबाट पनि रोक्दै)। संतृप्ति स्लाइडरको समान प्रभाव हुनेछ, तर छाला टोन सहित सम्पूर्ण छवि परिवर्तन गर्दछ।
यी सुझावहरू केवल धनी र शक्तिशाली सुविधाहरूको सन्दर्भमा हिमशिलाको टुप्पो हुन् फोटोग्राफर सही गर्न र फोटो खिच्न अनुकूलनको लागि प्रस्ताव गर्दछ। कृपया टिप्पणीमा एक नोट दिनुहोस् यदि त्यहाँ वर्णन गरिएको कुनै अन्य प्रविधिहरू छन् भने।
टैग: एडोब फोटोशप CS4बालीक्रप छविहरूफिल्टरछविछवि क्रपछवि अनुकूलनफोटोफोटोग्राफीPhotoshopफोटोशप CS4unsharp मास्कअसहज मास्क फिल्टरभाइब्रेन्सकम्पन तह